शक्ति सन्तुलनका लागि नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सभामुख पद दिन सक्छः लेखक
प्रस्तुत छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकसंगको अन्तवार्ता
उपनिर्वाचनका क्रममा तपाईं पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुमेर फर्कनुभो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हिसाबले जनताको ‘मूड’ कस्तो देख्नुभो ?
उपनिर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा पनि जनताले जनताले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सचेत गराउन खोजेको देखिन्छ। सरकारको भूमिकालाई लिएर जनता सन्तुष्ट देखिँदैनन्। पहिले नेकपाले जितेको स्थानमा नेपाली कांग्रेसले जित्नुको अर्थ जनताले सरकारसँगै प्रतिपक्षबाट अझ राम्रो भूमिकाको अपेक्षा गर्नु पनि हो।
तर, जनतामा त कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि निकै कमजोर देखियो भन्ने गुनासो छ नि ?
हो, सरकारसँगै प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि जनता सन्तुष्ट छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले क्रियाशील भएर काम गर्न सकेन भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ। त्यसको कारण के हो भने कांग्रेस आन्तरिक विषयमा रुमल्लिएको छ।
सधैँभरि आन्तरिक विषयमै रुमल्लिइरहने कांग्रेसभित्रको खास समस्या के हो ?
हो, वास्तवमा कांग्रेस सधैँभरि रुमल्लिइरहेको जस्तो देखिन्छ। तर, हाम्रो आन्तरिक समस्या सिद्धान्तबारेको विवाद होइन। नीति र आदर्शबारे पनि विवाद छैन। मुख्यतः पार्टी सञ्चालनको कार्यविधिलाई लिएर हामीबीचमा विवाद छ। पार्टी सभापतिले यसलाई मिलाएर लैजान खोज्नुभएको छ। तर, सबैलाई मिलाउने कुरामा समस्या छ। यी कुराले आफैंभित्र रुमल्लिएर बसेका कारण पनि बाहिर प्रतिपक्षको भूमिकालाई लिएर टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।
कांग्रेसका धेरै भातृसंस्था नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्, १४औं महाधिवेशन आउन लाग्दा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता सरकारभन्दा आफ्नै नेताको विरोधमा उत्रिएका छन्। यस्तो किन ?
यो पार्टी अनुशासनको कुरा पनि हो। तर, तपाईंले भनेजस्तै १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ। धेरै नेता नेतृत्वमा पुग्न चाहनुहुन्छ। जो नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्नुहुन्छ, उहाँहरूले एकले अर्काको आलोचना गर्ने काम भइरहेको छ। अर्को कुरा नेपाली कांग्रेसमा अलि अलि आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या सधैँ रह्यो। अहिले त्यो समस्या बढ्दै गएको छ। त्यहीकारण पनि कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष बन्न सकिरहेको छैन।
तपाई‌ं सभापति शेरबहादुर देउवानिकट भनेर चिनिनुहुन्छ। कांग्रेसका भातृ संगठनको अवस्थाबारे तपाई‌ंलाई धेरै थाहा छ। त्यसबारे सभापतिलाई सुझाव दिनुहुन्न ?
हो, पार्टीका विभागहरू पनि अहिलेसम्म गठन भएका छैनन्। किन यस्तो भयो भने सभापतिज्यूले वरिष्ठ नेता लगायत सबै नेताहरूसँग सरसल्लाह र समझदारीका आधारमा विभाग गठन गर्ने प्रयास गर्नुभो। तर, त्यसमा पार्टीभित्र सहयोग भएन। पछिल्लो समय महाधिवेशनकै मिति नजिक आइसकेकाले किन विभाग चाहियो भन्ने कुरा आइरहेका छन्। त्यसकारण सभापतिले मिलाएर लैजान खोजेको, तर मिल्न नसकेको स्थिति एकातिर हो भने अर्कोतिर १४ औं महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धा शुरू हुनु पनि हो।
सरकारसँग जनता खुसी छैनन् तर कांग्रेसबाट पनि जनताले आशा गर्न सकेका छैनन्। यो हुँदाहुँदै पनि मुलुक दुई पार्टी सिष्टममा जाने देखिएको छ।
त्यसो भए मिल्ने भन्दा असन्तुलन बढ्ने अवस्था देखिएको हो ?
हो। यो अवस्था अझै बढ्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको अवस्था चाहिं के हो अहिले ?
मैले अघि पनि भनें, सरकारसँग जनता खुसी छैनन् तर कांग्रेसबाट पनि जनताले आशा गर्न सकेका छैनन्। यो हुँदाहुँदै पनि मुलुक दुई पार्टी सिष्टममा जाने देखिएको छ। उपनिर्वाचनको परिणाम हेर्नुभो भने कि नेकपा जितेको छ कि नेपाली कांग्रेस। अर्थात् प्रतिस्पर्धा दुई पार्टीको बीचमा छ। तराईमा पनि दुई पार्टीको क्षेत्रीय मत आएको छ।
तपाई‌ं केही समय पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला पुगेर फर्कनुभो। भारतसँग जोडिएको त्यहाँको सीमासम्बन्धी विवाद पनि चर्किइरहेको छ। त्यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो ?
१८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाबीच जुन सन्धि भयो, त्यसमा नेपालका महाराजाले काली पश्चिमको भूभाग दाबी गर्ने छैनन् भनिएको छ। अर्थात्, नेपालको भूमि काली ९महाकाली० नदीसम्म हो। त्यो सन्धि हुँदा ब्रिटिशहरूले नक्शा जारी गरे। त्यो नक्शामा काली नदी भनेर लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई भनिएको छ। काली नामको अर्को नदी छैन भने अब धेरै प्रमाण किन खोज्नु पर्‍योरु
तर, तपाईंकै पार्टीका सभापतिले नेपाल सरकारसँगको सल्लाहमा भारतले लिम्पियाधुरालाई आफनो नक्शामा राख्यो भनेर बोल्नुभो नि ?
सभापतिले आशंकाको आसय व्यक्त गर्नुभएको हो। अहिले यस्तो राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ, जुन यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। हिजो यस्तो परिस्थिति नै थिएन। राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डतादेखि राष्ट्रियताको सवालमा कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको कुरा उठेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबै दलले सरकारलाई खुट्टा नकमाई अघि बढ भनेर ढाडस दिएका छन्। तर, यसमा सरकारको अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षी दल भए पनि स्थानीय सरकारमा तपाईंहरू पनि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। जनताको असन्तुष्टि त तपाईंहरूप्रति पनि हो नि ?
मैले अघि नै भनें, जसको सरकार छ त्यहाँ त्यो पार्टी पपुलर छैन। हाम्रो सकारात्मक कुरा के मात्र हो भने पहिलेभन्दा अहिले बढी मत आएको छ। पहिलेको अनुपातमा बढी स्थानमा जितेका छौ। तर असन्तुष्टि हामीप्रति छैन भन्ने होइन।
अहिले संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन अवस्थामा छ। नयाँ सभामुख चयनका लागि प्रयास पनि हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले के तयारी गरेको छ ?
संसद लामो समयदेखि सभामुखविहीन अवस्थामा छ। यो अवस्थामा सरकारलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। मलाई आशा छ, सरकारले सभामुख पद प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिन सक्छ। कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे छलफल चलाएको छैन। तर, सरकारले संसदको दोस्रो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई सभामुख दिएर शक्ति सन्तुलन कायम गर्न सक्छ।